Gudiga Olala Doorashada KGS oo Si Dedban u Hogaamin Doona Shariif Sheekhuna
12 October, 2018 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Abdukadir Shariif Sheekhuna Oo SI DEDBAN, loogu magacaabey olalaha doorashooyinka Shariif xasan , wuxuuna sameyn doonaa Balanqaadyada xildhibaanada, waxaa xildhibaanada loo horumarinayaa lacag gaareysa $10,000 .
Dhinaca maaliyada waxaa loo magacaabey Madeer oo ah Shariif walalakiisa asagaa bixinaya wixii qarash ah, waxaana loo balan qaadaya xildhibaan kasta $60,000 oo marka dambe la isku raacey in circa loo fiiriyo:
Gudiga Olala Doorashada waxaa kaloo kujira Caruush oo loo balanqaadey in laga dhigayo madaxweyne kuxigeenka 1aad, halka Fiqina loo balanqaadey madaxweyne kuxigeenka 2aad.
Cartan Bidaar waxaa loo xilsaarey qalqalgelinta , cabsi gelinta xildhibanada iyo isku xirka kooxda shabaab xildhibaankii loo arko inuu kasoo horjeedo shariif Xasan, Sheekh Aadan.
Waxaa Gudiga kuujira oo asna Gudiga Olalala La Shaqeyn doona oo xildhibanada qofkasta waxa uu yahay soo tabintooda loo xilsaarey Cabdullaahi Black oo iminka ah wasiirka Gaadiidka KGS.
Shariif wuxuuu Gudoomiyaha Baarlamaaka ku Amrey in Gudiga Doorashada ay kasoo dhex muuqdaan gar iyo gardarraba Xasan Eelaay iyo Xasan Black
Xaaf oo aqbalay Doorashada Galmudug Bisha Luuliyo, kana baxay heshiiskii uu la galay Ahlu Sunna. (Warsaxaafadeed).